Arindrao amin'ny workspaces | Avy amin'ny mac aho
Raha mpamorona ianao, mpianatra, programmer, mpampianatra, mpitantana ny tetikasa, mpandraharaha ... na olona hafa terena miasa miaraka amin'ny tetikasa samihafa, ny fikambanana no zava-dehibe indrindra. Raha marina fa afaka mamorona lahatahiry isika ary mametraka ny atiny rehetra ilaintsika ao anatiny toy ny hoe kitapo tsy misy farany io dia tsy vahaolana tsara indrindra izany.
Ny tetikasa tsirairay izay iasantsika dia mitaky a lahatahiry, fisie, fampiharana, pejin-tranonkala, mailaka... noho izany ny vahaolana amin'ny fampirimana ahatonga ny zava-drehetra dia tsy azo tanterahina amin'ny fotoana rehetra, raha tsy hoe manana loha mahavariana isika. Amin'izao fotoana izao hidirana amin'ireo antontan-taratasy rehetra ilaintsika amin'ny tetikasa manokana, afaka mampiasa fampiharana toa ny Workspaces isika.
Toeram-piasana dia noforonina ary noforonina manokana hitantanana tetikasa, na mahaleo tena na miaraka, satria mamela antsika hanana ny loharano ilaina rehetra ho an'ny tsirairay voalamina ao anaty fampiharana mitovy amin'izay ahafahantsika miditra amin'izy ireo haingana sy tsy mila mikaroka ny solosaintsika, ny Internet, ao anaty vatasarihana. ao anaty fitoeram-pako na ara-batana na ara-niomerika.
Raha te hahalala izay loharanon-karena ananantsika ho an'ny tetikasa manokana dia mila tsindrio fotsiny ny anaran'ny tetikasa isika ary tsindrio ny bokotra Start hanehoana asehoy ny antontan-taratasy rehetra ary sokafy ny fampiharana ilaina. Mba hampidirana ny fampahalalana mifandraika amin'ireo tetikasa, mila manokatra ny tonian-dahatsoratry ny tetikasa fotsiny isika ary hisintona ireo rakitra, rindranasa, antontan-taratasy, mailaka rehetra mifandraika amin'ny tetikasanay amin'ilay fampiharana.
Avy amin'ilay rindranasa mihitsy, azontsika atao ny manamboatra fa ny rindranasa ilaina hanatanterahana ilay tetikasa dia manokatra fisie manokana, misoroka ny tsy hikarohany azy amin'ny solosaintsika. Raha matetika ianao miara-miasa amin'ny tetikasa nefa tsy hitanao loatra ny fomba hitazomana ny fampahalalana ilaina rehetra, dia mety izany mila manomboka mampiasa Workspaces ianao.
Workspaces dia manana vidiny ao amin'ny Mac App Store 2,29 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Arindrao amin'ny workspaces ny fampahalalana rehetra momba ny tetikasanao
Ny fampiofanana 30 minitra dia mamaha ny fanamby ho an'ny Fizarana manaraka ho an'ny Apple Watch
Ny fampiharana an'ny antoko fahatelo dia voaozona ao amin'ny Apple Watch